समयमा प्रवेश परीक्षा नहुँदा चिकित्सा शिक्षाका शैक्षिक क्यालेन्डर अस्तव्यस्त – Health Post Nepal
२०७८ असार ११ गते ९:३७
कोरोना संक्रमणका कारण समयमा कक्षा र परीक्षा संचालन हुन नसक्दा विद्यार्थीको भविष्यसँगै समग्र शैक्षिकसत्र समेत नराम्रोगरी प्रभावित भएको छ।
अघिल्लो शैक्षिक वर्षदेखि कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षा समयमै हुन नसक्दा चिकित्सा शिक्षाको पनि शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावित बनेको हो।
चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा मेडिकल क्षेत्रका सबै विधाहरुको प्रवेश परीक्षा चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिने व्यवस्था छ।
तर कोरोना संक्रमणका कारण शैक्षिक वर्ष २०७७÷०७८कै मेडिकल शिक्षातर्फका विभिन्न विषयको प्रवेश परीक्षा नै हालसम्म हुनसकेको छैन्।
स्वाभाविक अवस्थामा अहिले यो शैक्षिक वर्षको प्रवेश परीक्षा हुने समय हो।
गत वर्ष झण्डै तीन लाख विद्यार्थीहरुले कक्षा १२ को परीक्षा दिएका थिएकोमा ४१ हजार पास भएका थिए।
हरेक वर्ष झैं चिकित्सा शिक्षाका लागि २०७६ सालको कक्षा १२ को ब्याचबाट पनि ३५ हजार विद्यार्थीहरुले प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन भरेका थिए।
यी हजारौं विद्यार्थीहरु मध्ये डाक्टर बन्ने सपना बोकेर परीक्षा पर्खिनेको संख्या १५ हजार हाराहारीमा हुन्छ।
पेन्टागन कलेज काठमाण्डौबाट कक्षा १२ पास गरेका अनिल साह एमबिबिएसका लागि ब्रिज कोर्ष गरेर प्रवेश परीक्षाको पर्खाईमा छन्।
‘प्रवेश परीक्षा नै नहुँदा पढेको पनि बिर्सिन थालिसकियो’ उनले भने।
काठमाडौमा तयारी गरिरहेका उनी कोरोना संक्रमण उच्च भएपछि जन्म स्थान सिराहामै गएर बसे। ‘झण्डै एक वर्ष खेर जान लागिसक्यो। घरमै बसेर पढ्यो, फेरी बिर्सिन्छ, अनि फेरी पढ्न बस्यो। यसरी नै केही काम नै नगरी बिताइरहेको छु,’ उनले भने।
त्यस्तै, २०७७ सालका कक्षा १२ को अर्को ब्याच पनि यसै भिडमा होमिन आइपुग्ने बेला भएको छ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यालय तहका सबै परीक्षा साउन मसान्त भित्रमा सक्ने तयारी गरेको छ। बोर्डका सूचना अधिकारी जयन्ती सत्यालले कोरोना संक्रमणकै कारण यसवर्ष पनि परीक्षा गर्नमा ढिलाई भएको बताए।
‘स्थिति सहज बन्दै गएपछि परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ। कुन मोडलबाट परीक्षा लिने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको छ। हाललाई भने सुरक्षाको अवस्था र सहज वातावरणलाई हेरेर पर्खिरहेका छौं,’ उनले भने।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले जम्मा ८ हजार विद्यार्थीहरुका लागि मात्र कोटा तोकिएको छ भने ३५ हजार विद्यार्थीहरुले आवेदन दिएका छन्। यस्तोमा धेरै विद्यार्थीहरुले अन्य केही वर्ष कुरेर पनि परीक्षा दिने गरेका छन्।
एकै पटक दुईवटा ब्याच आउँदा आयोगसँगै विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा शिक्षा अध्यायन गराउने कलेज तथा प्रतिष्ठाहरुलाई पनि समस्या परेको छ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका मेडिकल तर्फका डिन डा. राजेन्द्र कोजुले शैक्षिकशस्त्र प्रभावित हुँदा भविष्यमा जनशक्तिमा उत्पादन र परिचालनसमेत प्रभावित हुने बताए।
प्रवेश परीक्षा समयमै हुन नसकेका कारण दुईवटा व्याचलाई व्यवस्थापन गर्न निकै कठिन हुने भएको छ।
हाल मेडिकल विधामा एमबिबिएस, बिडिएच, बिपिएच, बिएससी नर्सिङ, बिपिटिको कुनै पनि विषयको पढाई शुरु नै हुन सकेको छैन। तर सोही ब्याचबाट इन्जिनियरिङ, मानविकी, कानून पढ्ने विद्यार्थीहरुको पढाई भने शुरु भइसकेको छ।
‘एकवर्ष समय खाली भएका कारण अबको ४÷५ वर्षमा उत्पादन हुने जनशक्तिहरु अलि ढिलो हुने देखिन्छ,’ उनले भने। यसले केही हदसम्म स्वास्थ्य सेवामा पनि यसको असर पर्ने जानकारहरु बताउँछन्।
डा. कोजुले अबका दिनमा स्थिति सहज हुने वित्तिकै प्रवेश परीक्षा संचालन गरिहाल्न आवश्यक रहेको बताए।
सामान्य अवस्थामा चिकित्सा विषयका प्रवेश परीक्षा ढिलामा पनि असोजमा हुनुपर्ने हो । गत वर्षकै परीक्षा भएको छैन्। जसले गर्दा समग्र शैक्षिक क्यालेन्डर प्रभावित भएको छ।
हरेक वर्ष काठमाण्डौ विश्वविद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्र जुलाई अगस्टबाट शुरु गर्ने गरेको थियो भने यस वर्ष असार साउनमा सरेको छ।
त्यस्तै इन्सिट्युट अफ मेडिसिनमा सेप्टेम्बरभित्र कक्षा संचालन हुन्छ। बी पि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पनि अगस्ट देखि सेप्टेम्बर सम्ममा शुरु हुने गरेको थियो।
अहिले सबैको शैक्षिकशत्र एक वर्ष दिलो भएको डा. कोजू बताउँछन्।
‘अब धेरै ढिलो नगरी पुरानो र नयाँ ब्याचका विद्यार्थीहरुलाई ६ महिनाको अन्तरमा कक्षा भर्ना गरिनुपर्छ,’ उनले भने।
गुणस्तरमा सम्झौता नहुनेगरी फ्याकल्टीको उचित परिचालन गरेर गुमेको क्यालेन्डरलाई ट्याकमा फर्काउनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले अघिल्लो वर्ष रोकिएको मेडिकल शिक्षाको सबै प्रवेश परीक्षा असार अन्त्यसम्म सक्ने तयारीमा रहेको जनाएको छ ।
आयोगले असार २६ गतेदेखि प्रवेश परीक्षा सञ्चालनगरी असार अन्तसम्म सक्ने आयोग जनाएको छ।
परीक्षा सञ्चालनका लागि सिसिएमसीसँग अनुमतिको माग गरेको छ।